အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Salai Chit Oo Latt - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Salai Chit Oo Latt
Hello. Salai Chit Oo Latt (ဆွေးနွေး) ၀၆:၄၄၊ ၂၃ မေ ၂၀၁၈ (UTC) Hello,I am here now
၁ ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Salai Chit Oo Latt !
၂ Interwiki Links (link to English Wikipedia and other Wikipedias)
၃ Community Insights Survey
၅ Reminder: Community Insights Survey
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Salai Chit Oo Latt !ပြင်ဆင်
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၀၆:၅၁၊ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Interwiki Links (link to English Wikipedia and other Wikipedias)ပြင်ဆင်
Languages at left lower corner⇒Add links⇒ Language:English (enwiki)⇒Page:xxxxx⇒link with page⇒Comfirm.
This is how we link pages between Myanmar and other Wikis.ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၀၀:၂၇၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Hi Salai Chit Oo Latt,
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Salai_Chit_Oo_Latt&oldid=482933" မှ ရယူရန်